Amanqaku ka-Ashwini Dave Martech Zone |
Amanqaku ngu UAshwini Dave
Ngokufika kokulinganiswa kweshishini, uphononongo olukwi-Intanethi, kunye nemithombo yeendaba kwezentlalo, iinzame zenkxaso yabathengi kwinkampani yakho ngoku zidibene nodumo lwegama lakho kunye namava akho kubathengi kwi-intanethi. Inyaniso, ayikhathali ukuba zinkulu kangakanani iinzame zakho zokuthengisa ukuba inkxaso kunye namava akho. Uphawu lwenkampani lufana nodumo lomntu. Uzuza igama ngokuzama ukwenza izinto ezinzima kakuhle. UJeff Bezos Ngaba ngabathengi bakho kunye nawe